Maalmahaan baraha bulshada waxaa ku soo badanaaya in dadka ey qiyaasaan muuqaalkooda markii ey weynaadaan ama markii ey dhalin yaro noqdaan siduu u ekaan doono ayagoo isticmaalayo aaladda loo yaqaano FaceApp.
FaceApp ma aha barnaamaj cusub, waxuu soo baxay 2017, waxaa leh Russia ama ruushka qolo wax u hormariso. Balse waxaa la moodaa baryahaan inuu si fiican usoo shaac baxay. Haddaba Halis intee la’eg ayuu leeyahay barnaamaj kaan???
Markii aan booqday bogiisa shuruudaha iyo qusuusiyaadka waxaan ka helay xogag aad muhim u ah sidoo kalena halis ku ah isticmaalaha barnaamajkaan. In ka mid ah oo ugu muhimsannaa waaa kuwaan soo socda.
Waxuu aruurinayaa dhamaan sawiradda ku jiro taleefan kaaga
Waxuu adeegsanayaa internet ka si uu muuqaal kaaga u badalo
Waxuu la shaqeeyaa qeyb sadaxaad oo u habeesa sawirada
Waxuu aruurinayaa dhamaan xogta kuugu saabsan hadey noqoto; website yada aad booqato, waxaad jeceshahay aad raadiso markasta, meesha aad joogto, cinwaan ka aad isticmaasho IP ga, iyo in badan asagoo la wadaagayo qeyb sadaxaad uu la shaqeeyo barnaamaj ka. Waxaa soo dhanna waxuu siin doonnaa website yadda wax xayeysiista.
Haddii aad iska tirto barnaamaj ka wali wuu heynayaa xogtaada sawiradda iyo intii kale aan soo sheegnay.
Waxuu ku abuurayaa gudaha mobile kaaga wax loo yaqaano Device Identifier, kaasoo u diri doono xogtaada FaceApp iyo qollada 3aad ey wada shaqeystaan.